PressReader - Isolezwe: 2017-11-13 - Kushone usana kwasha nabazali kusha umjondolo
Kushone usana kwasha nabazali kusha umjondolo
KUSHONE ingane eneminyaka emibili ngesikhathi kusha umjondolo ebilele kuwo nabazali bayo kuForeman Road, eSydneyham, eThekwini, entathakusa, izolo.
Abazali bayo basesimeni esibucayi esibhedlela. Ingane nabazali bayo baphuthunyiswe esibhedlela ngemuva kokuhangulwa ngamalangabi omlilo. Ingane ishone ngemuva kwamahora ambalwa ingeniswe esibhedlela.
Kusolwa ukuthi abazali bayo bakhohlwe ukucisha ikhandlela ngesikhathi belala. Umlilo oqubuke kulo mjondolo ushise imijondolo engaphezulu kuka-800 endaweni.
Umphakathi oshelwe yimijondolo, izolo ubumi izixongolo ezizeni, abanye behleli emgwaqweni nezimpahla ezincane abaphume nazo.
UNksz Alice Mofokeng obegone usana lwakhe olunezinyanga ezintathu uthe akaphumanga nalutho.
“Ngisheshe ngawubona umlilo, ngaphuma ngigijima nengane ngoba ubuza ngamandla kanti umjondolo wami uphakathi nendawo. Bengisaba ukuthi ngizohluleka ukunyuka umqansa uma ngibamba izimphahla,“kusho yena.
Amanye amalungu omphakathi akhale ngondlovu kayiphikiswa abanqamule ipayipi lezicishamlilo ngoba befuna kucishwe kuqala imijondolo yabo.
UMnuz Senior Ndabankulu oshelwe yisitolo sakhe endaweni, uthe kunabantu abaphazamise ukusebenza kwezicishamlilo, okuholele ekutheni babaleke, umlilo waqhubeka washisa eminye imijondolo ebingasinda.
“Sibe nethemba sibona izicishamlilo zisheshe zifika. Abasebenzi bakhona badonse amapayipi behla nawo. Bathe bephakathi nendawo sezwa kuthiwa kunabantu abathe amanzi awaphumi emapayipini bawasika bezama ukusindisa izindlu zabo. Abanye bebaphoqa ukuthi baqale ngasohlangothini lwemijondolo yabo. Bazibone besengozini yokulimala babaleka balinda ukuthi kuze kufike amaphoyisa. Ngaleso sikhathi umlilo uyaqhubeka,” kusho yena.
Uthe kuke kwazanywa nokuthi kubhidlizwe eminye imijondolo ukuze amalangabi angeqi kodwa abanikazi baleyo mijondolo bathi imijondolo yabo mihle, abafuni ibhidlizwe.
“Abese beshelwe bebethi kungcono ishe yonke imijondolo,” kusho yena.
UMnuz Mqapheli Bonono wabaHlali baseMjondolo ukugxekile ukuphazanyiswa kwezicishamlilo.
UMnuz Owen Singh obelawula abezicishamlilo uthe: “Umphakathi ubuzitshela ukuthi sizothi sifika sibe sivulela amanzi. Ukunqamula kwabo ipayipi kuholele ekutheni amanzi angabe esaba nomfutho owenele nakho okudale ingcindezi.
Siyacela umphakathi ukuthi uma kusha usidedele senze umsebenzi wethu ngoba siwufundele,” kusho yena.
KUSHE imijondolo elinganiselwa ku-800 kuForeman Road, eSydneyham, entathakusa izolo, imindeni eminingi yasala dengwane